Ibhokisi yeBhokisi: Ukurekhodwa kwe-2020 kukhokelela ekuLibeleni kwiShishini lokuPakisha eliCwangcisiweyo
Kwintsasa yakutshanje yasentwasahlobo, uKen Dunn ukhuphele umthwalo omkhulu wekhadibhodi kunye nezinye iimveliso zephepha kwiyadi esezantsi yokurisayikilisha ayisebenzisayo. UDunn uqhuba iZiko leZibonelelo, elingenzi nzuzo eliye lasebenza indawo yaseChicago amashumi eminyaka. “Ngokwenene siqale ngokunceda abasebenzi ekuchongeni iinkonkxa kunye neebhotile kwisitofu ...
Abenzi beebhokisi zokupakisha ezirinjiweyo abajamelene nexabiso lempahla ekrwada
IKolkata: Umzi-mveliso weebhokisi zamaphepha ujongene nengxaki njengoko amaxabiso ezinto ezingafunekiyo edubule ngeepesenti ezingama-30 ukuya kwezi-30 esongela ukuguqula ishishini lingenakuphumelela, utshilo umphathi wecandelo. E-India, kukho malunga ne-corrugators ezizenzekelayo ezingama-350 kwaye ngaphezulu kwe-10,000 yeeyunithi ezizenzekelayo kwi-cou ...
Iziko leeNkonzo zeRiphabliki 'lokurisayikilisha ePlano, eTexas. Umfanekiso ngoncedo lweeNkonzo zeRiphabhlikhi
Iinkonzo zeRiphabhlikhi zikhuphe idatha yokuphinda isetyenziswe ekubonakaliseni ukwanda okubonakalayo ekusetyenzisweni kwakhona kweebhokisi zekhadibhodi, iinkonkxa zealuminium kunye neebhotile zeplastiki kunye neebhotile kunyaka ophelileyo, kubonakalisa utshintsho kwindlela yokuziphatha yabathengi kuninzi olusetyenziswa ekhaya. Iziphumo zalo bhubhani zabonakala ngokucacileyo ...
Ingxowa yokukhuthaza, Isipho sokuKhuthaza, Ibhokisi yeZipho zeLamin, Yenyuka ibhokisi Carton, Ibhokisi yeZipho, Iibhokisi zezipho zezipho,